अब गोविन्द भर्सेज लोकमान – ABC KHABAR
अब गोविन्द भर्सेज लोकमान
June 27, 2016 ABC Khabar राजनीति
काठमाडौं, १३ असार । नेपालीको सामाजिक तथा आर्थिक विसंगतीहरुको बारेमा विरोधीका रुपमा रहेका त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालका डाक्टर गोविन्द केसी पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारकालागि पटक पटक अनसन बस्दै आएका व्यक्तित्व हुन् । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप तथा बढ्दो व्यापारिकरणको विरोधमा आमरण बसेर सरकारलाई केही सम्झौताहरुमा पु¥याएका छन् ।
यसै शिलसिलामा उने डा. केसीले यसपटक फेरी अर्को विष्यमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छ । अघिल्ला समयहरुमा संस्थागत रुपमा सरकार तथा नीजि कम्पनीहरुले गर्ने गरेको व्यवहार तथा नीतिका विरोधमा आन्दोलित हुने केसी यस पटक व्यक्ति सम्मको विरोधमा उत्रिएका छन् । उनले अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगको नामबाट लोकमानसिँ कार्कीले दादागीरी गरेको भन्दै महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग राखेका छ । केसी चारसुत्रीय मागहरु अघि सार्दै आठौंपटक अनसनको तयारीमा छन् । असार २६ बाट सुरु हुने भनिएको यसपटक उनको अनसन अलिकति फरक मुद्दामा केन्द्रित हुने देखिएको छ ।
डा. केसीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई पदच्युत गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । आइतबार शिक्षण अस्पतालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अधिकांश समय लोकमानकै आलोचनामा खर्चे । यद्यपि उनका पुराना मागहरु पनि यथावत छँदैछन् । पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीले आफुले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारकालागि सातौँ पटक सम्म सत्याग्रह गरेको भन्दै अब आठौं चरणको सत्याग्रहका लागि आफु तयार रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘ स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका बेथितिहरुलाई लिएर मैले आजसम्म सातचोटि सत्याग्रह गरेँ । विभिन्न सरकारसँग सम्झौता पनि भए । तर, ती सम्झौताहरु पूर्ण कार्यान्वयन भएनन् । कतिपय सम्झौता ठाडै उल्लंघन भए । कार्यान्वयन भएका पनि आफ्नै अनुकुलता अनुसार गरिए । हाम्रो लडाइँ बेथितिविरुद्ध हो । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताविरुद्ध हो । राजनीतिमा मौलाएको बेथितिले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सबैभन्दा बेसी प्रभावित भएका छन् । यसबाट सर्वसाधारण जनता पीडित बनेका छन् ।’
उनले देश समृद्ध हुन प्रत्येक नागरिक स्वस्थ र शिक्षित हुनुपर्छ । भन्दै यो क्षेत्रमा राजनीर्तिकरण भइरहेको पनि बताएका छन् । । पार्टी कार्यकर्ता भर्ती भइरहेका छन् । स्वस्थ रहेर जिउने नागरिकको नैसर्गीक अधिकार हनन भएको छ । राजनीतिक दलहरुले जनताको हितका लागि नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अधिकार दुरुपयोग गरिरहेका छन् । नेपालको जनसंख्या ८० प्रतिशत गाउँमा बस्छ र २० प्रतिशत शहरमा । तर, हाम्रा मेडिकल कलेजहरु शहरकेन्द्रित छन् । त्यसैले सम्पूर्ण जनसंख्याको ३ चौथाइ नेपालीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन् । ग्रामीण भेगमा पनि स्वास्थ्य संस्था खुले पो उनीहरुले पनि स्वास्थ्य सेवा पाउँथे ।
उनले यसपटक अधिकांस समय अख्तियारको दादागीरीकोबारेमा बोलेका थिए । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनाधिकृत हस्तक्षेप । अख्तियारको जिम्मेवारी त बेथिति हटाएर थिति बसाल्ने हो । भ्रष्टाचार निवारणै त नहोला, तर न्यूनीकरण गर्ने हो । तर, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नै भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप समेत लगाएका छन् । आफ्ना नातेदार र आफ्ना मान्छेहरुको स्वार्थ पूरा गर्न पदीय दुरुपयोग गरेर ठाउँ कुठाउँ हस्तक्षेप गर्दै हिँडेका छन् । भ्रष्टाचार रोक्ने जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्ति नै महाभ्रष्ट भएपछि के हुन्छ ? अहिले त्यही भइरहेको छ ।
आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा चैं केही गर्दैनन् उनी । करोडौं, अरबौं भ्रष्टाचार गर्नेसँग मिलेमतो गर्छन् । अनि, निर्दोषलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्छन् । कतिलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्छन् त कतिलाई मुद्दा लगाएर फसाउँछन् । के यो अधिकारको महा दुरुपयोग होइन ? उनले प्रश्न उठाएका छ । उनले भने, ‘यस्तो लाग्छ, अख्तियारले समानान्तर सत्ता चलाइरहेको छ । अख्तियार प्रमुखले जे गरे पनि कसैले छुन सक्दैन । अब अचाक्ली भो ।’
लोकमानका भाइ–भतिजाको बिराटनगरमा मेडिकल कलेज छ । त्यसलाई सम्वन्धन दिने योग्यता पुगेको थिएन । तर, अख्तियारका प्रमुखले काठमाडौं युनिभर्सिटीमा २–३ चोटि गएर ब्ल्याकमेलिङ गरे । अन्ततः नियम नै चेञ्ज गर्न लगाएर ‘विस्तारित कार्यक्रम’ भनेर स्वीकृति दिन लगाए । त्यो कसरी विस्तारित कार्यक्रम हुन्छ ?आफ्नो स्वामित्वमा भएको संरचनामा सञ्चालन गर्ने भए पो विस्तारित कार्यक्रम । अरुको स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने भएपछि केको विस्तारित कार्यक्रम ?
यहाँ अर्को मेडिकल कलेज छ, नाम खोल्दिँन । तर, उनको आफ्नै भन्दा पनि हुन्छ । त्यसको पूर्वाधार केही पनि छैन । तर, उनले यहाँका पदाधिकारीलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर सीट बढाउन लगाउने, नयाँ कार्यक्रम शुरु गर्न लगाउने गरिरहेका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिल चलाउने भनेको लोकमानसिंहले हो ? उनले त्यहाँका डाक्टरहरुलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्छन् । मुद्दा लगाउने धम्की दिन्छन् र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छन् । अरुलाई फसाउन अख्तियारलाई साह्रै सजिलो पनि छ । कसैलाई बेनामे उजुरी दिन लगाए भइगयो ।
निजी मेडिकल कलेजहरुले ठीकसँग काम गरेका छन् कि छैनन् भनेर इन्स्िटच्युट अफ मेडिसिनबाट अनुगमनमा जानुपर्ने हुन्छ । अनुगमनमा राम्रा मान्छे गए भने लोकमानले मुद्दा हालिदिन्छन् । त्यसो भएपछि राम्रा मान्छे त नजाने भए । अनुगमन गर्न डराउने भए । जसले उनले भनेको मान्छन्, उनीहरुलाई पठाइन्छ । यस्तो दादागिरी मैले इदी अमिनको सुन्थेँ । यिनी त इदी अमिनभन्दा पनि माथि रहेछन् । यिनले कुनै पनि क्षेत्रमा भाँजो हाल्न बाँकी राखेका छैनन् । अब उनलाई रोक्नुपर्छ । त्यसैका लागि मैले लोकमानलाई महाअभियोग लगाएर पदच्युत गर्ने माग राखेको हुँ । उनलाई हटाएर जिम्मेवार तथा स्वच्छ छवि भएको व्यक्ति त्यहाँ ल्याउनुपर्छ ।
नयाँ नक्सा दर्ता नहुने
जङ्गली च्याउ खाएर पाँचजना बिरामी